यस्तो'नि आत्महत्या ! रुख चार फिट अग्लो, झुण्डिने शर्मिलाको उचाई पाँच फिट ? | ebaglung.com
यस्तो’नि आत्महत्या ! रुख चार फिट अग्लो, झुण्डिने शर्मिलाको उचाई पाँच फिट ?
२०७५ आश्विन २३, मंगलवार १७:१३	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनर, गुल्मी २०७५ असोज २४ । नेपालको १० बर्षे जनयुद्धमा लडाकु रहेकी गुल्मीकी शर्मिला बिकको भारतकोे नयाँ दिल्ली स्थित गुडगावा पालम बिहार , सेक्टर २३ ए–ब्लग मा रहश्यमय मृत्यु भएको छ । उक्त ब्लगको पार्कमा रहेको ४ फिट उचाई रहेको र उनलाई समेत थेक्न नसक्ने सानो रुखको पोथ्रामा पाँच पिट अग्ली शर्मिला झुण्डिएको अबस्थामा फेला पर्नुले हत्य गरी झुण्डिाईएको आशंका त्यहाँका नेपाली संघ संगठनले गरेका छन ।
जनयुद्ध कालमा लामो समय सम्म लडाकु रहेकी र शान्ति प्रकृया पछि अयोग्य ठहर भई बाहिरिएकी शर्मिला भारत पलायन हुन बाध्य भएकी थिईन । अक्टुबर ६ तारिखका राती कोठाबाट श्रीमान र जेठाजु संग झगडा गरेर निस्कीएको उनका श्रीमान नरेश बिकले सञ्चारर्की संग बताएका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ भारत शाखाका प्रतिनिधी बाबु रोका , देशभक्त आवाजका अध्यक्ष हरि रोका , अखिल भारत नेपाली एकता समाजका ओमबहादुर खत्री र स्वतन्त्र नागरिक विपना शाही लगायतले उनको हत्या भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन । घटनाको अनुसन्धान भई रहेको पालम बिहार प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
सो चौकीका अनुसार पोष्मार्टम रिर्पोट तिन दिन पछि आए पछि थप अनुसन्धान अगाडी बढाईने छ । गलामा पासो लगाई झुण्डिएकी उनि टुक्रुक्क भुईमा बसेकी थिईन । उनको शव गुल्मी पठाउनका लागि भारतमा क्रियाशिल गुल्मी भुर्तुङ्ग सेवा समाजले ७ हजार आईसी सहयोग गरेको छ । त्यस्तै गुडगावा स्थित रुरु ट्राभल्सले नेपाल सम्म निशुल्क पठाउन लागेको प्रवन्धक केशव खनालले बताए ।
जनयुद्धमा जस्तै आक्रमक स्वभाव रहेको , अरुको कुरा नमान्ने, आफ्नै ढिपी गर्ने र सबै संग घुल मिल गर्ने गरेको आरोपमा श्रीमति र श्रीमान विच झडडा चल्दै आएको हाम्रो समाचार श्रोतले जनाएको छ । उनका १३ बर्षिया छोरी र १० बर्षिय छोरा छन । उनको सोमबार परिवारजनले शव बुझेर अन्त्यष्टि गरी सकेका छन् । पछिल्लो चरण भारतमा गुल्मीका चार जनाले आत्महत्या गरेको बताईएको छ ।
गुल्मीमा अपाङ्गताका सरोकारवाला बीच एक दिने अन्तरक्रिया सम्पन्न
२०७६ असार २८, शनिबार २१:१८
गुल्मीको गाउँमा नुन, सदरमुकामा सुन अभाव : प्रजिअ र प्रहरी प्रमुख नआउदा सुनचाँदी व्यवसायी दु:खी !
२०७६ असार २८, शनिबार ०६:१५